Maraykanka, 01 April 2019
Xulista xeer-beegtida kiiska Maxamed Nuur oo billaabanaysa
Waxaa maanta billaabaneysa xulista xeer-beegtida maxkamadda sarkaal Soomaali-Mareykan ah oo horey uga tirsanaa booliiska magaalada Minneapolis, kaasi oo dilay haweeney u dhalatay dalka Australia.
Soomaali ka Qaybgaleysa Maalinta Muslimiinta Mareykanka
Maanta waxa magaalada Washington ee caasimada dalka Mareykanka ka furmeya shir sanadle ah oo ay Muslimiinta Mareykanka isugu yimaadaan iyaga oo la kulmaya sharcidajiyeyaasha dalkan, madax kale iyo waliba ururo Muslimiin ah oo gobollada kala duwan ee dalkan xarumo ku kala leh.
Jadeeco fara-ba'an ku haysa Mareykanka
Warbixinta Mueller: Trump lama shaqeyn Ruushka
Xeer-ilaaliyaha Mareykanka, William Barr ayaa warqad uu axaddii u diray Congress-ka ku sheegay in warbixinta Robert Mueller ee faro-gelintii uu Ruushka ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee 2016 aysan helin wax caddeymo ah oo muujinaya in madaxweyne Trump ama qof ku xiran ay la shaqeeyeen Ruushka.
Afghanistan: Askar Mareykan ah oo howl-gal lagu diley
Laba ka tirsan ciidamada Mareeykanka ayaa lagu dilay maanta oo Jimca ah dalka Afganistaan xilli ay hawlgal ku jireen.
Amnesty: Mareykanka rayid ayuu ku dilay Soomaaliya
Hay’adda xuquuqda aadanah u dooddo ee Amnesty International ayaa sheegtay in tirada duqeynmaha dhinaca cirka ah ee uu Mareykanka ka fuliyay Soomaaliya ay aad u korortay.
Warbixin: Waxbarashada Soomaalida Ohio
Senate-ka Mareykanka oo diiday dagaalka Yemen
Aqalka Senate-ka Mareykanka ayaa xalay ansixiya xeer soo afjaraya ku lug lahaanshaha Mareykanka ee dagaalka Yemen iyo taageerada ay Washington siiso isbaheysiga carbeed ee uu hogaamiyo Sacuudiga ee dagaalka ka wada Yemen.
MN: Argagixisada Lacago Looma Dirin
Hanti-dhowrka sharci-dejinta ee gobolka Minnesota ayaa warbixin ka soo baxday lagu sheegay in wax dambi ah lagu waayey baaris uu horay u codsaday golaha sharci-dejinta ee gobolka MN, taas oo ku saabsaneyd in xarumaha lagu xanaaneeyo caruurta Soomaalida ay 100 milyan oo dollar argagixiso u direen.
Mareykanka oo xayiraad cusub saaraya Venezuela
Ergayga gaarka ah ee Dowladma Mareykanka ugu qaabilsan arrimaha siyaasadda ee dalka Venezuela, Elliott Abrams, ayaa sheegay in maamulka madaxweyne uu todobaadkan ku dhawaaqi doono cunaqabateeno cusub oo lagu soo rogo doono Venezuela.
Pelosi: Trump ma mudna xil ka qaadis
Afhayeenka Aqalka Wakiilada Mareykanka, Nancy Pelosi ayaa meesha ka saartay xil ka qaadis lagu sameeyo madaxweyne Trump, ayada oo sheegtay inuusan mudneyn.
Trump oo beddelay amarkii Obama ee sheegista khasaraha rayidka